Oromiyaa: Yeroon, yeroo dhugaa hubatanii, dhugaaf dhaabbatanii dha!! | Kichuu
Posted on November 28, 2019 by kichuu_admin
Yeroon kun Oromoof, YEROO MURTEESSAA dha!! Filannoon qabnu hedduu miti. Filannoon fuula keenya dura jiru, Gabrummaatti deebi’uu yookaan, wareegama barbaachisu baasuun BILISUMMAA Oromoo goonfachuu dha!!
Warri filannoon keessan Bilisummaa ta’e, Kunoo GALAA QABSAA’OTAA!!
Oromoo hidhuun takkaa qabsoo Oromoo hin laaffifne. Inumaayyuu, Oromoon haguma hidhaan itti jabaatu, qabsoo bilisummaatti daran jabaachaa dhufe. Kan ammaas kanuma firrisa!!
Hidhaan akkanaa, dhumaatiin sirnichaa gahuu isaaf ragaa dha!! Kan ummata jumlaan hidhee aangoo irra ture tokkoyyuu hin jiru. Bakka jirutti, hidhamtootaa fi maatii hidhamtootaa haa gargaarru!!
“Godina Gujii, magaalaa Nageellee Booranaa irraa qabamanii hidhaman, nama 18
1. Geetaahuun Magarsaa
2. Daggafaa Gaarii
3. Gammachuu Hiikaa
4. Huseen Siraaj
5. Jiraataa Tasfaayee
6. Amantii Hambisaa
7. Likkaasaa Fiqaaduu
8. Dinqaa Haayiluu
9. Ifaa Danuu
10. Nagaasaa Guuttataa
11. Badhaadhaa Urgaa`aa
12. Jireenyaa Habtaamuu
13. Getaachoo Waaqjiraa
14. Lammeessaa Ifaa
15. Gazzaanyi Baddeessaa
16. Fantaa Simeen-Warqi
17. Baqqalaa Alamaayyoo
18. Abbaa Giroosarii Roodas ammoo gadhiisan”
Ummanni keenya akka boohe kanatti hin hafu! Guyyaan Bilisumama dhiyaateera!!
“Magaalaa Qeebbee keessatti kan argaman maatiin sabboontotaa fi qabsaawotaa daraaraa hamtuu keessa jiru.
Namoota hedduu ijoollee keessan bosona jiran galchuu waan diddaniif hojii mootummaa hin hojjettan jedhanii qaamni mootummaa fi Command post achirra jiru namoota hedduu hojii irraa ariiyaa jiru.
Garii Immoo hidhaa fi dararaa hamtuu keessa jiru.
kaan immoo magaalaa sana lakkisanii baqataa jiru.
Kanumaan kan wal qabate gochaa ciiggaasisaa yaalii duggugaa sanyii maatii qabsa’aa kan ta’an Barsisaa #Qana‘aa #Agaa mana jireenyaa isaanii irratti waraanni Mootummaa boonbii darbachuun qabeenyaa isaanii fi nama mana sana keessaa jiru guutummaa guutuutti abbiddaan baleessaniru.
Yeroo ammaa namni hunduu gochaa kanaan rifatee bosonatti baqachaa waan jiruuf odeessa si’aawaa/Bifa Qindaa’een argachuu hin dandeenye. nama balaa kanaan miidhame adda baasnee isin beeksisna.”
#Booree-Oromoon qabsoo isaatiin waa hedduu jijjiiree jira. Injifannooleen argamanis hedduu dha. Diinota Oromoo hedduu golgaa irraa kaasee dirreetti kan baases qabsoo Oromoo ti. Gaaffiin Oromoo akka addunyaatti beekamus taasisee jira.
Qabsoon kun amma gara boqonnaa xumuraa irra jira. Qabsoo kanatti xumura gochuuf halkaniif guyyaa harka walqabannee haa hojjannu. Yeroon keenya akka qoosaatti qisaasamuu hin qabu.
Ummata keenay ijaaruu fi jabeessuu irratti karaa hundaan haa hojjannu. Oduu xiqqeessinee, hojiin haa jabaannu. Kan hojjatee humna horate qofaatu diina isaa injifata.
Oromoon ummata guddaa dha; guddina kana humnatti jijjiruun, gaaddisa badii Oromoo fi Oromiyaa irra marsaa jiru, yeroo xumuraaf gaggeessuun barbaachisaa dha. Oromoon kana nagaa waaraa argatu, yoo Oromoo bilisummaa argate, yoo Oromiyaan birmadummaa goonfate qofaa dha. Bilisummaa Oromoo fi Birmadummaa Oromiyaa dhugoomuutti haa jabaannu!! Horiin keenya waraana Oromoo gargaaruuf haa oolu; beekumsi keenya qabsoo Oromoo jabeessuu fi injifannoolee Oromoon goonfataa dhufe tiksuu fi guddisuuf haa oolu. Ogummaan keenya malaa fi maleenya qabsoo keenya humneessu maddisiisuuf haa oolu!
Hojiin keenya, hojii qabsoo keenya tarkaanfachiisu irratti kan xiyyeefate ta’uu qaba. Yeroo mara diinni keenay kan hojii nuuf baasu, akka nuti hojii qabsoo irraa gufannuuf ta’uun beekamuu qaba. Kana hubachuun, yeroo mara waan ofii keenyaa akeekkannee hojjachuuf dursa kennnuu qabna. Hojiin akeekkanne kun kan qabsoo keenya fuuldura tarkaanfachiisu ta’uu mirkaneeffachuun nurra jira.
Qabsoon keenya gormee, asheetee jira. Qabsoo kana irraa firii gaarii kan argannu garuu haga dhumaatti yoo itti jabaannee hojjannee dha. Yeroo kamiyyuu irraa laafuun hin barbaachisu. Hojii diinni keenya qabsoo irraa nu dhaabuuf akka danqaatti uumuuttis hidhamuu hin qabnu.Eehee, Bilisummaa Oromoo barbaadna. Hojiin keenya kan Bilisummaa Oromoo guddisu ta’uu qaba; gabrumama Oromoo fi Oromiyaa irraa buqqisuu barbaadna; hojiin keenya kan gabrummaa nurraa buqqisuu ta’uu qaba; kan qabsoo Oromoo karaa hundaan gargaaru ta’uu qaba!! Waliin Bilisoomna!! Booree dha!!
Qondaaltonni lama Shawaa Lixaatti rasaasaan ajjeefaman,
-ABO’n haa mariyannu jechuun paartileef waamicha dhiheesse
-ODP’n paartii haaraatti makamuurratti waan namni jedhu
-Hirmaannaa dubartootaa Paartilee Mormiituu keessatti